2014-10-11, 09:00 AM
GMIT Office, No. 56 Shwe Bonthar St, Pabedan, Yangon, Yangon, 11141
Do you want to start your own technology company, but don't know where to get started? You are not alone. Every day millions of people go to jobs they don't enjoy, but few do something about it. At the “Employee to [NOTE: Event Date is Confirmed. Time is still to be Confirmed]
Entrepreneur” event, you can hear the stories, tips, and best practices of those who left their jobs to pursue their own startup company. Listen to the experiences of people just like you that have made the transition, and discuss any questions or concerns that you have. How do you know if you haveagood idea? What are the first steps in an entrepreneurial journey? Join us forafun evening!
ကိုယ်ပိုင် နည်းပညာအခြေခံတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ချင်ပါသလား။ ဘယ်က စတင်ရမှန်းမသိဖြစ်နေပါသလား။ သင်တစ်ယောက်တည်း ထိုသို့ဖြစ်နေသည်မဟုတ်ပါ။ သန်းပေါင်းများစွာသော လူတွေဟာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သူတို့မပျော်မွေ့တဲ့ အလုပ်ကိုဝင်နေကြရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှ ဒါကိုပြောင်းလဲဖို့ မကြိုးစားကြဘူး။ ယခု "ဝန်ထမ်းကျော်စွမ်း၊ စွန့်ဦးလှမ်း" ဆွေးနွေးပွဲမှာ၊ အလုပ်လုပ်နေရာကနေ ဖောက်ထွက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်ကြသူတွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ၊ အကြံပြုချက်တွေ၊ နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ကြားသိရမယ်။ သင့်လိုပဲ စိတ်ကူးနဲ့ အပြောင်းအလဲလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသူတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို နားထောင်ပြီး၊ ကိုယ့်စိတ်ထဲက ဝေခွဲရခက်တဲ့အကြောင်းတွေ၊ မေးခွန်းတွေ မေးမြန်း ဆွေးနွေးနိုင်ပါမယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကူးကောင်းမကောင်း၊ အလုပ်ဖြစ်မဖြစ်ကို ဘယ်လိုသိနိုင်မှာလဲ။ စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းစတင်ဖို့ ပထမဆုံး ခြေလှမ်းတွေက ဘာတွေလဲ။ ဒါတွေကို သိနိုင်ဖို့၊ လာရောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Who should Attend? ဘယ်သူတွေတက်ရောက်သင့်သလဲ
Anyone who dreams of launching their own companyကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီတည်ထောက်ဖို့ စိတ်ကူနေးသူတွေ Anyone with an idea foranew business either launched inside their employer or independently လုပ်ငန်းသစ် စိတ်ကူးသစ်ရှိပြီး လုပ်ငန်းထဲမှာပဲဖြစ်စေ၊ သီးသန့်ဖြစ်စေ လုပ်ကိုင်ချင်သူတွေ
Anyone curious about being an entreprenuer somedayတစ်ချိန်ချိန်မှာ စွန့်ဦးတီထွင်သူဖြစ်ဖို့ စိတ်ကူးနေသူတွေ
What are some of the Topics? ဘာတွေပါမှာလဲ
What is the difference between being an employee versus beingafounder [Presentation] ဝန်ထမ်းဖြစ်ရတာနဲ့ လုပ်ငန်းတည်ထောင်သူဖြစ်ရာ ဘာတွေကွာခြားသလဲ
What to consider before becoming an entrepreneurစွန့်ဦးတီထွင်သူဖြစ်ရန် မကြိုးစားမီ စဉ်းစားသင့်တာတွေ
How do you know when the time is right to quitဘယ်ချိန်မှာ အလုပ်ထွက်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မလဲ What are the first steps in the entrepreneurial journeyစွန့်ဦးတီထွင်ခရီးရဲ့ ပထမခြေလှမ်းတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ and more...
CEO & Managing Director, Ahtar Oo Co., Ltd